सीता दाहालले पाएको पदकको बचाउमा उत्रिए विप्लव पुत्र प्रकाश « Sansar News
६ आश्विन २०७८, बुधबार १४:५६
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की पत्नी सीता दाहालले पाएको पदको विषय अहिले चर्चामा छ । उनले पदक पाउनु ठिक हो कि बेठिक भन्ने कोणबाट बहसहरु भईरहेका छन् ।
प्रचण्डपत्नी सीता दाहालको विषयमा भईरहेको बहसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का छोरा प्रकाश चन्द पनि जोडिएका छन् । उनले दाहालले पाएको पदकको विषयमा भईरहेको आलोचनाको विरोध जनाएका छन् ।
आमा तिम्लाई मेरो पनि सम्मान:
बिरोध गर्ने साथिहरु ठन्डा दिमागले सोच, तिम्रो बुडिले तिमि अबेर घर आउँदा २ दिन बोल्दिनन। तिम्लाई काँडा बिज्दा आमाले राति भात खान्निन तर यि आमाले त त्यो संघर्ष मा तिम्रो आमा र बुडिले भन्दा पक्कै बढि नै दु:ख गरिन अनि किन रुन्छौ यार? आमालाई मजाग नबनाउ। pic.twitter.com/gEcziN4Qk0
— डा. प्रकाश चन्द (@Ernestochand93) September 21, 2021
चन्दले दाहाललाई सम्मान गरिनु राम्रो कुरा भएको भन्दै दाहालप्रति मजाग नगर्न आग्रह गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले भनेका छन्, ‘आमा तिम्लाई मेरो पनि सम्मानस् बिरोध गर्ने साथिहरु ठन्डा दिमागले सोच, तिम्रो बुडिले तिमि अबेर घर आउँदा २ दिन बोल्दिनन। तिम्लाई काँडा बिज्दा आमाले राति भात खान्निन तर यि आमाले त त्यो संघर्ष मा तिम्रो आमा र बुडिले भन्दा पक्कै बढि नै दुस्ख गरिन अनि किन रुन्छौ यार ? आमालाई मजाग नबनाउ।’
सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा दाहाललाई सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीबाट विभूषण गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्ने सूचीमा उनको नाम ३६ औं नम्बरमा राखिएको छ ।
प्रचण्डपत्नी सीतालाई पनि राजनीतिक अभियन्ताका रुपमा विभूषण !
प्रधानमन्त्री ओलीका ११ शैलीप्रति एमाले नेतृको टिप्पणी
ओली बचाउने हस्ताक्षर अभियान नै संकटमा, फुट्यो महन्थ…
कहाँ चुक्दै छौ हामी ?
व्यक्तिको नामका आधारमा ‘वाद’ बनाउने कुरा कार्ल मार्क्सले…